Indlu Yepulazi - I-Airbnb
DeKalb, Illinois, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Bill And Kim
U-Bill And Kim Ungumbungazi ovelele
Ibekwe epulazini, le ndlu yasepulazini itholakala kumamayela angu-3 entshonalanga ye-Northern Illinois University kanye namamayela angu-4.5 ukusuka e-DeKalb, e-Illinois. Jabulela ukuphuma nokushona kwelanga okuhle kusukela kuvulandi wangaphambili nangemuva.
Indlu yasepulazini inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okugeza angu-2 agcwele, nekhishi elinosayizi ogcwele. Iwasha neyomisa kutholakala endaweni engaphansi. Ama-TV amabili, izidlali ze-DVD ezimbili, kanye nokukhethwa kwamaDVD nakho kuhlinzekwa. Kufakwe ne-Dish satellite TV ne-inthanethi (i-wifi).
Lena yipulazi elidala elingaba nobuhlakani ngezikhathi ezithile! Uvulande ophakathi, i-A/C, nezingubo zokulala ezinikeziwe kuzokusiza ugcine unethezekile ngezinsuku ezinomoya. Indlu ihlezi kuma-acres angu-10 omhlaba owayeyipulazi elisebenzayo. Sisebenza kanzima ukwenza kube ipulazi elisebenzayo futhi. Sicela uphephe! Kuzoba nezinkukhu ezinobungane ngaphakathi noma eduze nezakhiwo zasepulazini.
4.69 out of 5 stars from 167 reviews
4.69 · 167 okushiwo abanye
Izinto zedolobhana ziseduze -- izitolo zegrosa, amagalaji kaphethiloli, izindawo zokudlela, amathiyetha wamamuvi, njll...!
Ibungazwe ngu-Bill And Kim
Siyakujabulela ukusebenzisa i-Airbnb lapho sisohambweni ngoba ngeke sisakwazi ukuhlala kahle ekamelweni elilodwa lehhotela. Okuhlangenwe nakho kwethu nge-Airbnb kube kuhle kakhulu futhi sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala nathi. Mina nomndeni wami sihlala endlini ehlukene epulazini. Siseduze uma udinga noma yini kodwa ngenye indlela izonikeza esakho isikhala.
Siyakujabulela ukusebenzisa i-Airbnb lapho sisohambweni ngoba ngeke sisakwazi ukuhlala kahle ekamelweni elilodwa lehhotela. Okuhlangenwe nakho kwethu nge-Airbnb kube kuhle kakhulu…
UBill And Kim Ungumbungazi ovelele